Ciidanka dowladda Soomaaliya oo howlgal qorsheysan fuliyay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Ciidanka dowladda Soomaaliya oo howlgal qorsheysan fuliyay
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo kala duwan waxaa saacadihii la soo dhaafay ka sameeyeen degaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo mararka qaar ay tagaan Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Holwgalka ayaa Ciidamada waxaa ka sameeyeen degaannada Shaam-gare, Raqayle, Raydabley, Caanooley, Galoole, iyo Gumeysi diid, kuwaas oo hoos taga Degmada Awdhegle ee Gobalka Shabeellaha Hoose.
Saraakiisha howlgalka hoggamineysay ayaa waxaa ay sheegeen in howlgalka lagu burburiyay Salhdigyo ay lahaayeen Ururka Al-Shabaab, isla markaana ay kasoo abaabuli jireen weerarada qorsheysan.
Sidoo kale saraakiisha waxaa ay sheegeen in howlgalka ay ku qabteen Xubno ka tirsan Al-Shabaab, sidoo kale ay fashiliyeen dhowr miino oo ay degaannadaas ku Aaseen.
Ciidamada dowladda ayaa dhowr jeer waxaa ay holwgallo kala duwan ka sameeyen degaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose, balse ay mararka qaar weeraro kala kulmaan Al-Shabaab.
Previous articleMadaxweynaha Hir-Shabeelle oo la kulmay Wafdiga ka socda dowladda Qatar
Next articleDHAGEYSO:-Warka Subax ee Radio Risaala 04-05-2021